Friday January 24, 2020 - 19:00:33 in Wararka by Super Admin
uu u yahay Madaxweynii hore Siilaanyo, ayaa la sheegay in Siilaanyo markii uu xilka wareejinayey uu Madaxweyne Muuse kala dardaarmay in inanka meel loo magacaabo, Madaxweyne Muuse Biixi-na uu ogolaaday.
Haddaba, Madaxweyne Muuse Biixi miyeyna qorshihiisa fashilineyn kooxo hore loogala quustay waxqabad? Miyaanay habooneyn in la soo gaadhay xilligii la xisaabtami lahaa? In la soo bandhigo xadigii lacagihii malaayiinka ahaa ee lagu bixin jiray caafimaadka Gobolka fog ee Sanaag, xillii Siilaanyo oo Muuse Moorgan 2 ninkaa loo bixiyey wakhtigaasi uu maamuli jiray Hay’addii Shifa oo lacagayoow badan maamuli jirtay.
Haddaba, dhamaan cid kasta oo uu maqaalkani gaadho waxaanu ka codsanaynaa inay nala wadaagaan lacagihii badnaa ee uu Maamuli jiray Muuse Moorgan 2 ninkii loo bixiyey wakhtigii SIilaanyo, ee uu Siilaanyo Sodogga u ahaa, haatanna Gudoomiyaha looga dhigay Hay’adda DHawrista Tayadda Somaliland?
Noogu soo diri (text message), wixii xog ah ee aad ka haysaan musuqii wakhtigaasi lagu sameeyey Caafimaadka Gobalka Sanaag.